Ebumnuche 7 iji jiri VPN na gam akporo | Gam akporosis
Ebumnuche 7 iji jiri VPN na gam akporo
Ọtụtụ bụ ndị mmadụ kpebiri iji VPN. N'ihi ịdị adị ha, ịnwere ike ịnweta netwọkụ kọmputa iji nwee mgbakwunye mgbatị nke netwọkụ ahụ. Nke a bụ ekele na njikọ njikọ ihe ntanetị sitere na njikọ raara onwe ya nye na nke ezoro ezo.
Họrọ VPN chọrọ obere oge, ebe ọ bụ na ndị nweere onwe ha egosighi na ọ bara uru maka ndị ọrụ na-eji ya. Okwesiri inweta onye ugwo iji chebe ya mgbe ichoro, jiri nyiwe nkwanye ma ọ bụ zere geoblocks.
Otu n'ime ndị na-enweta ala na-adịbeghị anya bụ NordVPN, a mma VPN maka obere ego na ịrụ ọrụ dị oke egwu nye ndị ọzọ. O dakọtara na nyiwe dịka Netflix, HBO, Disney + na ọtụtụ ọrụ ntanetị ndị ọzọ dị taa.
Otu n'ime nnukwu ihe kpatara iji NordVPN bụ ngalaba nchekwa, inwe ike ịnweta weebụsaịtị ebe enwere ike mgbochi na mbụ, dị ka mgbe ị na-achọ ịnweta ọdịnaya Netflix site na mpaghara ndị ọzọ. VPN dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta saịtị n'enweghị nsogbu ọ bụla na-emebi data gị.
E nwere ụdị VPN anọ, nke mbụ bụ ụzọ dịpụrụ adịpụ VPN, nke abụọ bụ isi-na-isi VPN, nke atọ bụ ọwara, nke anọ bụ VPN karịrị WAN. Nke ikpeazu bu nke kachasi gbasaa, ma ọ bụ nhọrọ dị oke egwu, n'agbanyeghị na nke mbụ atọ dị irè.
2 Tonweta Netflix site na mpaghara dị iche iche
5 Otutu nyiwe
6 Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa
Ihe mbu na mbu mgbe I na eji NordVPN bu nchekwa, sava anaghị eji diski ike, kpọmkwem ọ na-eji RAM. Enweghị ihe ọ bụla echekwara, sava ndị edobere bụ nke ha ma rụọ ọrụ dị ka ọwara mgbe ị na-abanye ibe na ọrụ.
Ihe ezoro ezo ọ na-eji bụ AES-256, ọ bụ otu n'ime algorithms zoro ezo kachasị nchebe taa. Dị ka ndị ọkachamara si kwuo, ọ bụghị ugbu a ọ gaghị ekwe omume ịkwụsị yaAgbanyeghị na ISP ma ọ bụ ndị hackers agaghị enwe ike ịgụ ya, ọbụlagodi na ha nwere ike igbochi ya. AES-256 bụ atụmatụ ezoro ezo ngọngọ nke gọọmentị United States nakweere dị ka ụkpụrụ izo ya ezo.
Tonweta Netflix site na mpaghara dị iche iche
Nkpuchipu ala bu ihe ozo nke NordVPN. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnweta ọdịnaya sitere na USA, ị ga-ejikọrịrị na sava na mba ahụ. Ọtụtụ bụ usoro ndị dịnụ tupu ha atụgharịa ma tinye Netflix Spain.
Nzọụkwụ iji mepụta nke a dị mfe, n'ihi na nke a ọ dị mkpa ibudata ngwa ahụ, debanye aha maka ọrụ ahụ, jikọọ na sava United States, banye na Netflix na ọ bụ ya. Enwere ike ijikọ ya na mpaghara ndị ọzọDịka ọmụmaatụ, ọdịnaya nke United Kingdom bụ otu n'ime ụbọchị ndị a gbara izu.
Isi ihe ọzọ bara uru mgbe ị na-eji VPN bụ ọsọ, yana NordVPN a na-ekwe nkwa ọsọ kachasị ọsọ na ahịa. Iji mee nke a, ọ dị mkpa ịhọrọ sava nke na-ekwe nkwa ọsọ ọsọ ọsọ, ọ dị mkpa ịhapụ ihe nkesa jupụta maka ahụmịhe kachasị mma. NordVPN bụ otu n'ime VPNs kachasị ọsọ na ahịa, niile mgbe ị gafere nyocha dị iche iche nke ụlọ ọrụ German AVTEST.
Ihe kachasị VPN bụ nke na-emelite sava ya, yabụ nkwa ọsọ bụ nkwa nke inwe ike ilele ọdịnaya ọ bụla na-enweghị ọnya ma ọ bụ nkwụsị. Na NordVPN a, ọ dị n’ihu asọmpi ya na i nwere ike ịhụ live video enweghị nsogbu ọ bụla.
Pịa ebe a wee nweta NordVPN obere oge na-enye na 72% kwụsịrị na ọnwa 3 onyinye maka naanị € 2.64 kwa ọnwa.
Mmejuputa iwu nke NordLynx emeela VPN dị nke njikọ ultrafast na nkwa nzuzo dị na saịtị nke onye ọrụ kwadoro. Ọ bụ ọkpụkpụ azụ nke WireGuard, ọgbọ na-esote VPN oghere ọwara nke mere nke ọma na Linux, Windows, Android, iOS na macOS kemgbe ntinye ya.
NordLynx dị ọsọ ọsọ, niile maka afọ nke ịrụ ọrụ na WireGuard, usoro iwu nwere ihe gbasara 4000 nke koodu, ihe dị ka 100 ugboro dị ala karịa usoro ndị ọzọ. Ọ dị mfe iji mejuputa, na mgbakwunye na ịnye ọrụ a ga-ekwe nkwa arụmọrụ ma zuru oke maka ịnweta VPN.
NordVPN emewo ka mkpọsa ahụ gaa na nyiwe niile iji nye ma nye nye onye ọ bụla n'ime ndị ọrụ ya otu ahụmịhe ahụ, ma ọ na-eme nchọgharị ma ọ bụ na-eri iyi egwu, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ dị na iOS, Android, Windows, Mac Os, Linux na Android TV sistemụ.
Site na ndenye aha, enwere ngwaọrụ 6 nwere ike ịnụ ụtọ nchekwa nke nyocha na NordVPN, zoo adreesị IP na izo ya ezo. Nke a dị mfe dịka ịbanye na ngwa ahụ ma jikọọ na Internetntanetị. na-enweghị nchegbu mgbe ịnweta na-enweghị IP nke ụlọ ọrụ nke ị na njikọ.
Otu ihe dị mkpa nke ụlọ ọrụ ga-abụrịrị ọrụ ndị ahịa. A na-edozi ya site na ajụjụ na obi abụọ a na-ajụkarị, ọ bụ ezie na NordVPN nwere ọrụ ndị ahịa 24, ụbọchị 7 n'izu, iji dozie obi abụọ ọ bụla nwere ike ibilite n'oge ahụ.
Nkwado na-eme n'ụzọ atọ, nke mbụ bụ site na ịga na Enyemaka Center, nke abụọ bụ site na-akparịta ụka ndụ na ọkachamara si ụlọ ọrụ na nke atọ bụ site na izipu email. Nke ọ bụla n’ime ihe ndị ahụ dị irè, nke abuo bu otu n’ime ndi oru.
Ọrụ nke enwere ike iji na enweghị mmachi nwere ọnụahịa dị ala n'ezie, na mgbakwunye na ịnye nchebe, ọsọ na adabara ngwaọrụ ọ bụla taa. N'ihe na-erughị 10 euro ị nwere ọrụ maka otu ọnwa, na-enweta Ntinye ego 72% ma ọ bụrụ na i were atụmatụ afọ abụọ ugbu a na inweta ọnwa 3 n'efu.
Ọ bụrụ na ị lee anya na ngwaọrụ 6 ndị ga-enwe ohere ịnweta n'elu ikpo okwu, ọ bụ ọnụahịa dị ala n'ezie ebe ọ nwere ohere ijikọ karịa sava 5.500. Na mgbakwunye, NordVPN na-enyekwa igwe ojii ọrụ ka ị bulite faịlụ ma chebe ha, ha niile na nzuzo data maka ụgwọ nke 2.64 kwa ọnwa.
Ya mere, elegharala nchebe na ịntanetị gị anya: pịa ebe a ma nweta oge dị oke: NordVPN 72% kwụsịrị na ọnwa 3 n'efu maka naanị 2.64 XNUMX kwa ọnwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ebumnuche 7 iji jiri VPN na gam akporo
5 egwuregwu na-apụghị na-efu efu gị gam akporo mobile
Ngwa 11 kachasị mma iji mata ụdị nkịta